आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ माघ १४ गते, बुधवार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ माघ १४ गते, बुधवार)
काममा धेरै लाभ उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन्। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ। टाढिएका आफन्त नजिकिन सक्छन्। तर तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ। पुरानो सम्झौता भंग हुन सक्छ। शुभचिन्तकहरूलाई साथमा लिएर काममा जुट्नुहोला, महत्त्वाकांक्षी योजना थालनी हुनेछ।
Previous Post	आजदेखि देशभर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाईंदै
Next Post	ट्रक दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु